४० करोडमा दुग्ध प्रशोधन केन्द्र स्थापना हुने - China Radio International
४० करोडमा दुग्ध प्रशोधन केन्द्र स्थापना हुने
(GMT+08:00) 2019-11-07 15:22:36
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा आधुनिक दुग्ध प्रशोधन केन्द्र स्थापना हुने भएको छ। असोज ९ गते सम्पन्न तिलोत्तमा लगानी सम्मेलनमा नगरपालिकाले दुग्ध प्रशोधन केन्द्र परियोजनालाई 'सोकेश' मा राखेको थियो। करीब ४० करोडको लागतमा दुग्ध प्रशोधन परियोजना निर्माण गर्न लुम्बिनी विशिष्टीकृत सहकारी संघले काम अघि बढाएको राष्ट्रिय समाचार समितिले लेखेको छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाले परियोजनका लागि चार बिघा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
संघले प्रदेश ५ का झण्डै ४०० सहकारीकर्मीबीच अन्तरक्रिया गरेर दुग्ध प्रशोधन परियोजनाको बारेमा अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ। रुपन्देहीसहित प्रदेश नं. ५ का सबै जिल्लामा उत्पादित दूधको बजारीकरणमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले दुग्ध प्रशोधन केन्द्रको अवधारणा अघि सारिएको हो। उचित बजारीकरण नहुँदा दूध उत्पादन हुने मुख्य सिजनमा यहाँका किसानले मिल्क होलिडेको समस्या भोग्न बाध्य छन्।
यस्तै लागतअनुसारको मूल्य पनि पाउन सकेका छैनन्। किसानलाई दूध उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्दै दूधको बजार सुनिश्चित गराउन परियोजनाको अवधारणा अघि सारिएको तिलोत्तमा नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताउनुभयो। तिलोत्तमाले आफ्ना दूध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर दूधमा एक अनुदान र पशु बिमा रकममा ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ। यस्तै पशुको पञ्जिका राख्ने तथा पशुपालन राहत कोष र समूहमा पशुपालन गर्ने महिलालाई बैंक ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था पनि मिलाएको छ।
युएचटी दुग्ध प्रशोधन परियोजना निर्माणमा प्रदेश सरकारले समेत सघाउने जनाएको छ। प्रदेश भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले दुग्ध प्रशोधन परियोजनाको स्थापनाले दूध उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण सहज हुने भएकाले यसमा प्रदेश सरकारले पनि आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनुभयो।
प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठ रुपन्देही जिल्ला दुग्ध उत्पादनमा विशिष्ट स्थान हासिल गरेको भन्दै दुग्ध प्रशोधन परियोजना स्थापना भएपछि त्यसको फाइदा किसानले लिन सक्ने बताउनुहुन्छ। दुग्ध प्रशोधन परियोजनासम्बन्धी अवधारणा तयार पार्नुभएका प्रदेश नं. ५ का पशुपक्षी तथा मत्स्य निर्देशनालयका प्रमुख तुलसीराम भण्डारीले सहकारीले नै प्रवद्र्धन गर्ने परियोजना आफैँमा सबैका लागि प्रेरणादायी बन्ने बताउनुभयो। लुम्बिनी विशिष्टीकृत सहकारी संघका अध्यक्ष खगराज शर्माले प्रदेश नं ५ का सहकारीकर्मीको उत्साहले परियोजनालाई गन्तव्यमै पुर्‍याउने बताउनुभयो।